Rev: Ukurekhodwa Kwomsindo Nevidiyo, Ukuhumusha, Ukuhumusha, Nokufaka Imibhalo | Martech Zone
Ngoba amaklayenti ethu anobuchwepheshe obusezingeni eliphezulu, kaningi kunzima ngathi ukuthola ababhali abanobuciko kanye nolwazi. Ngokuhamba kwesikhathi, sakhathala ukubhala kabusha, njengababhali bethu, ngakho-ke sahlola inqubo entsha. Manje sinenqubo yokukhiqiza lapho sisetha khona okuphathekayo istudiyo se-podcast endaweni - noma siwadayela - futhi siqopha ama-podcast ambalwa. Sirekhoda izingxoxo kwividiyo. Sibe sesithumela umsindo nevidiyo ngaphandle ukuloba namagama-ncazo. Sibe sesinikeza ukuloba kubabhali bethu abakuhlanganisa nezindatshana eziyizihloko esizishicilela kubhulogi lamakhasimende noma esizithumela kusayithi lezimboni langaphandle.
Inkampani esiyisebenzisela lokhu Rev, Kunconywe yinkampani yamavidiyo emangalisayo esisebenza nayo, Isitimela 918. Amanani entengo ayabiza, ukuguqulwa kuyamangalisa, futhi ukufaneleka kokuloba kube yinto ephezulu kakhulu. Njengoba sicindezela amaklayenti ethu kwividiyo eyanda ngokwengeziwe, sifuna futhi ukufaka amagama-ncazo ngevidiyo ngesikhathi sangempela ngoba amapulatifomu amaningi azobuka kuqala ividiyo ngaphandle kokudlala umsindo. UMfu naye unikeza le nsizakalo. UMfu unikela ngezinsizakalo ezilandelayo:
Ukuloba komsindo - iqembu labalotshiweyo lithatha ukurekhoda kwakho komsindo futhi likubhalele ngokunemba okungama-99%. Layisha amafayela akho ngewebhu noma Uhlelo Lokuloba lwe-iPhone, bese uthola umbhalo ophelele ngokushesha ngemuva kwamahora ayi-12. Ukuloba kwenziwa ngabantu, hhayi isoftware yokuqashelwa kwenkulumo, ngakho-ke bangabamba okuningi kwe-nuance nangokunemba okuphezulu kune-software. I-Rev ingaphatha cishe noma yiluphi uhlobo lwefomethi yomsindo (kufaka phakathi i-MP3, AIF, M4A, VOB, AMR, ne-WAV).
Ukubhalwa Kwevidiyo - iqembu labalotshiweyo lithatha ukurekhodwa kwevidiyo yakho futhi likubhalele ngokunemba okungama-99%. Layisha amafayela akho ngewebhu, bese uthola umbhalo ogcwele ngokushesha ngemuva kwamahora ayi-12. Ochwepheshe bevidiyo ye-Rev bazibhalela mathupha izici zomlomo nezibalulekile ezingezona ezomlomo zevidiyo yakho bese uqondanisa imishwana nezikhathi zesikrini. I-Rev ingaphatha cishe noma yiluphi uhlobo lwefomethi yevidiyo (kufaka phakathi i-MP4, WMV, M4A, MOV, AVI, VOB, AMR, WMA, OGG). UMfu futhi unokuhlanganiswa ne-Youtube neKaltura.
Isihloko sevidiyo - Wonke amafayela-ncazo ahambisana neCCC ne-ADA futhi ahlangabezana nezidingo zeSigaba 508. Amagama-ncazo ahambisana ne-Apple, i-Amazon, iNetflix, iHulu namanye amazinga. Amakhasimende angakhetha phakathi kwamafomethi amaningi wamagama-ncazo (konke ngaphandle kwenkokhiso eyengeziwe): I-SubRip (.srt), iScenarist (.scc), iMacCaption (.mcc), Umbhalo Ohleliwe (.ttml), Umbhalo Oshaliwe Osheshayo (.qt.txt) , Transcript (.txt), WebVTT (.vtt), DFXP (.dfxp), Cheetah .CAP (.cap), Spruce Subtitle File (.stl), Avid DS Subtitle File (.txt), Facebook ready SubRip (.srt ), XML (.xml), nabanye. Thumela ifayela lakho levidiyo, isixhumanisi kuvidiyo yakho egcinwe (ipulatifomu yevidiyo eku-inthanethi, i-FTP, iDropbox, njll.), Noma uhlanganise ne-API yabo. Uzothola ifayela lamagama-ncazo ongalisebenzisa ngokushesha, ulilayishe kungxenyekazi oyikhethile eku-inthanethi (isb Vimeo, Wistia), noma ulayishe isoftware yakho yokuhlela ividiyo (isb. I-Adobe Premiere Pro, i-Apple Final Cut Pro).
Isihlokwana sevidiyo esihunyushiwe - UMfu udala amafayela wemibhalo engezansi yolimi lwangaphandle wamavidiyo. Abahumushi babo abangochwepheshe basebenzisa amafayela wamagama-ncazo ayinhloko avunyiwe ngamakhasimende nevidiyo yakho ukudala ifayela lemibhalo engezansi ngezilimi namafomethi ahlukahlukene. Ngokuzenzakalelayo, amafayili wombhalo ongezansi we-Rev nawo ahambisana neFCC ne ADA. Izilimi zokuhumusha zifaka isi-Arabhu, isiBulgaria, isiCantonese, isiShayina (okwendabuko nokwenziwe lula), isiCzech, isiDanish, isiDashi, isiFarsi, isiFulentshi, isiGeorgia, isiJalimane, isiGreki, isiHindi, isiHindi, isiHungary, isiNtaliyane, isi-Indonesian, isiJapane, isiKorea, isiNorway, isiPolish, IsiPutukezi (iBrazil), isiPutukezi (iPortugal), isiRomania, isiRashiya, iSlovak, iSpanishi (iYurophu, iLatin America, i-American Hispanic), isiSwedish, isiTagalog, isiThai. IsiTurkey, i-Ukraine, ne-Vietnamese.
UMfu uvame ukufaka amagama-ncazo amavidiyo wokufunda online, ukuqeqeshwa, ezentengiso, izinto zokumaketha, amafilimu wezinto, amafilimu azimele, futhi cishe noma yiluphi olunye uhlobo lokurekhoda.I-Rev ingabhala amanothi emihlangano, amaqembu okugxila, ucwaningo lwemakethe, izingxoxo zethisisi, idatha yokuhlola, ama-podcast, ividiyo amavidyo, futhi cishe noma yiluphi olunye uhlobo lokurekhoda. Amagama-ncazo womsindo namavidiyo abiza u- $ 1.00 ngeminithi yevidiyo ngayinye, anemba ngo-99%, nokuguqulwa kwamahora angama-24, nesiqinisekiso esingu-100%.
Zama uMfu Namuhla!
Ukudalula: Sisebenzisa isixhumanisi sokudlulisela kulokhu okuthunyelwe futhi siklonyeliswa ngawo wonke amakhasimende amasha esiwaletha kuMfu!
Tags: I-AIFAmazonI-American Hispanic)AMRi-apulaArabicumbhalo oqoshiweIsevisi Yokuloba OkulalelwayoAVIifayela lemibhalo engezansi ye-avidBulgarianIsiCantonesei-cheetahIsi-Chinese (okwendabuko nokwenziwe lula)CzechDanishdfxpDK New MediaDutchamazwibela we-facebookfacebook ngomumo subripFarsiFrenchGeorgiangermanGreekHebrewHindiHuluHungarianIndonesianItalianJapaneseKoreani-Latin AmericaI-M4AsifisoMovmp3MP4NetflixNorwegianI-OGGPolishIsiPutukezi (eBrazil)IsiPutukezi (Portugal)umbhalo wesikhathi esheshayoukuvuselelaRomanianRussiannobuhleSlovakIsi-Spanish (Europeanifayela ngesihlokwana se-spruceisizindaSwedishI-TagalogIsiThai. IsiTurkeyumbhalo wesikhathiqeqesha i-918okulotshiweUkrainianAmagama-ncazo wevidiyoisihlokwana sevidiyoimibhalo engezansi yamavidiyoukuloba kwevidiyoIsevisi Yokuloba KwevidiyoVietnameseI-VOBWAVwebvttI-WMAI-WMVxml